July 24, 2019 - CeleLove
အရမ်းသည်းခံတတ်ပြီး တခုခုဆိုရင် ခံစားလွန်းတတ်ကြတဲ့ သောကြာ သားသမီးလေးများ အကြောင်း
July 24, 2019 Cele Love 0
အရမ်းသည်းခံတတ်ပြီး တခုခုဆိုရင် ခံစားလွန်းတတ်ကြတဲ့ သောကြာ သားသမီးလေးများ အကြောင်း သောကြာ သားသမီးတွေဟာ တ​ခုခုဆို ခံစား လွန်းတတ်​တယ်။ ​မျက်​ရည်​လွယ်​တယ်​။ ကိုယ်​ခံစားရတာ​တွေကို ဘယ်​သူ့မှ ​ပြောမပြဘဲ တစ်​​ယောက်​ထဲ ကျိတ်​ခံစားတတ်​တဲ့သူ လေးတွေပါ …။ သောကြာ သားသမီးတွေက လူ့လောကကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက အငိုသန်တယ်။ […]
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ဖြတ်ချင်လာပြီဆိုရင် ယောကျာ်းတွေ သုံးတတ်တဲ့ အကွက်များ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ဖြတ်ချင်လာပြီဆိုရင် ယောကျာ်းတွေ သုံးတတ်တဲ့ အကွက်များ သမီးရည်းစား Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန် လာပြီလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စစ်တ မ်းတွေအရဆိုရင် Relationship တွေမှာ မိန်းကလေးတွေဘက်ကနေ အရင် စပြီး လမ်းခွဲတာများပါတယ်။ယောက်ျားအများစုက လမ်း ခွဲရအောင်ဆိုတဲ့ […]
သင် နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေအုံးမလား ???
သင် နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေအုံးမလား ??? တစ်နေ့ ၁၀၀၀ စု . . ၅ နှစ်ပြည့်ရင် သင့်လက်ထဲမှာ ၁၈ သိန်းပိုင်ဆိုင်နေပြီး. . .၁၈သိန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကောင်းကောင်းတစ်ခုခု ထူထောင်နိုင်ပါတယ် …။ တစ်နေ့ […]
ယောက်ျားက ဗိုက်တစ်လုံးနှင့် ထားသွားလို့ သိမ်ကြီးဈေးနားက ကားတွေထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီအိပ်ခဲ့ရတဲ့ ချင်းလူမျိုး သားအမိ(ရုပ်သံ)
ယောက်ျားက ဗိုက်တစ်လုံးနှင့် ထားသွားလို့ သိမ်ကြီးဈေးနားက ကားတွေထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီအိပ်ခဲ့ရတဲ့ ချင်းလူမျိုး သားအမိ(ရုပ်သံ) ချင်းပြည်နယ်ဖလမ်းမြို့ကနေ မိုင်ဆန်သဲ (ခ)မူမူဟာ အသက် (၁၉)နှစ်အရွယ်မှာ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး တစ်ယောက်ထဲဆင်းလာခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ၃၇ လမ်း ထမင်းဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ချိန်မှာ ဘရင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိပြီး၂၉ လမ်းမှာ […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ မိခင် တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်အချို့
ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ မိခင် တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်အချို့ ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၉၊ ဗစ်တိုရီးယားလေးရဲ့ အမှုကို ဒီနေ့နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိခရိုင်တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို ဒီကနေ့ စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ အမှုစစ်ဆေးချက် ပထမပိုင်းအပြီးမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရ ပါတယ် နော် […]
မင်္ဂလာပွဲကို သတို့သား ရောက်မလာခဲ့တဲ့ အတွက် ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ( ဗီဒီယို )
မင်္ဂလာပွဲကို သတို့သား ရောက်မလာခဲ့တဲ့ အတွက် ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ( ဗီဒီယို ) သစ္စာမရှိသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဖြူစင်တဲ့ အမျိုးကောင်း သားသမီးလေးတွေ ပေးဆပ်နေ ရတာမျိုးကတော့ တကယ့်ကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတခု ပါပဲ နော် …။ ကိုယ် အရမ်း […]
ကိုကို ၂ ယောက်လုပ်တယ် သမီးကို ကိုကိုတို့က ချိုချဉ်လဲကျွေးတယ်
ကိုကို ၂ ယောက်လုပ်တယ် သမီးကို ကိုကိုတို့က ချိုချဉ်လဲကျွေးတယ် Victoria လေးအမှု့ တရားရုံးမှာ ကလေးကိုမေးတယ် မေး။ ။သမီးကို ဘယ်သူလုပ်တာလဲ? ဖြေ။ ။ ကိုကိုတို့လုပ်တာတဲ့ မေး။ ။ သမီးကိုလုပ်တာ ဘယ်နှယောက်လဲ? ဖြေ။ ။ ၂ ယောက်လုပ်တယ် သမီးကို […]
၁ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကို မြွေဟောက်အန္တရာယ်မှအသက်စွန့် ကာကွယ်ခဲ့သည့် ခွေးလေး ၂ ကောင်
၁ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကို မြွေဟောက်အန္တရာယ်မှအသက်စွန့် ကာကွယ်ခဲ့သည့် ခွေးလေး ၂ ကောင် ၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို မြွေဟောက်အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးအောင် အသက်စွန့် ကာကွယ်ခဲ့သည့် ခွေးလေး ၂ ကောင်၏လုပ်ဆောင်ချက်က တော့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများသို့ ပါကျော်ကြားလာခဲ့ ပါတယ် ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကီဒါပါဝန်မြို့ တွင် […]
“ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့််တက်လတ္တံ့သော ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း”
“ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့််တက်လတ္တံ့သော ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း” ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့််တက်လတ္တံ့။ အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း ၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် […]
အကြောသေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားစေနိုင်တာကြောင့် လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သွေးခဲခြင်းလက္ခဏာ(၆)မျိုး… ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ အခါတိုင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေအများကြီး မထွက်သွားအောင် သွေးခဲခြင်းဖြစ်စဉ်က အလိုလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သွေးခဲခြင်းဖြစ်စဉ်သာမရှိရင် လူတွေသေကုန်ကြတာကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာ သွေးခဲဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ သွေးခဲတယ် ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို အန္တရာယ်များတဲ့ အနေအထား […]